Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC Bayern si Nigeria & ụwa | TAA
Ndị agha na-eme mkpesa na-aga na Armenia mgbe onye ndú mmegide jidere
Ịgbanwe aha Swaziland 'agaghị eme n'otu ntabi anya ma ọ gaghị efu' - ozi
Ekiti guber: Ndi ochichi choro onye ochichi gomenti na ndi isi ochichi
Ndị agha na Niger Delta na-ewepụra onwe ha na President Buhari na General Boroh ...
Onye nduzi Napoli: Mkpịsị aka nke etiti na-emeghachi omume na mkparị
Home Tags FC Bayern
Karl-Heinz Rummenigge: Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike imeri Real Madrid, ọ bụ Bayern Munich
Onye isi ochichi nke Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge agbatuola Real Madrid n'ihu nke ụlọ Wednesday na-agbachitere Njikọ Njikọ ikpeazụ, nke mbụ.
Louis Van Gaal: Jupp Heynckes nwere ike ịghọ chi Bayern Munich
Louis van Gaal kwenyere na Jupp Heynckes ga-aghọ akụkọ akụkọ Bayern Munich ma ọ bụrụ na ọ lara ezumike nká na njedebe oge ahụ.
Bayern Munich na-eme ọkwa ọkwa n'agbanyeghị na 2016-17 Champions League na-apụ
Bayern Munich ekwuputala ihe ndekọ nke € 640.5 (£ 572.77m) na uru ọrụ nke € 149.1m maka afọ ụtụ ego 2016-17.
Real Madrid na-eche Werner atụmatụ ịbanye 'nnukwu ụlọ'
Timo Werner kwetara na ọ chọrọ isonyere "nnukwu ụlọ" n'etiti akụkọ ndị Real Madrid na-adọrọ mmasị na ịbanye na Germany onye na-egbu ya, bụ onye na-eme nchịkọta nke Njikọ Championship na Wednesday.
Mueller nwere ike iche ndụ mgbe Bayern
Egwuregwu Germany, Thomas Muller kwuru na ya nwere ike ịhapụ Bayern Munich mgbe ọ kwụsịrị ịgba ọkụ n'oge na-adịbeghị anya maka egwuregwu ndị Germany.
Bayern na-atụ anya inweta mmeri isii
Bayern Munich kpochapụrụ oge Bundesliga ọhụrụ na Friday na nchịkwa nke 13 nke ndị na-agba ọsọ 17 ha na-atụ anya na ha ga - achịkwa - ọ bụ ezie na a na - eji mmeri Usain Bolt mee ihe dị ka mkpali.
Ọtụtụ narị ndị na-akwado ndị na-akwado ndị mmadụ na-aga n'okporo ámá nke isi obodo nke Armenia n'oge ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka ebe onye agha ahụ na-enupụ isi nọgidere na-edoghị anya otu ụbọchị mgbe e jidere ya.
Onye isi nke Nigeria, Imoh Ezikiel, na-enwe mmechuihu na a tọhapụrụ Las Palmas ụlọ ịgba egwú ya na nkeji nke abụọ nke Spen mgbe afọ atọ gasịrị na nke 4-0 na-agagharị n'ụlọ site Alaves na Sọnde.
Oziọma Swaziland banyere ihe gbasara ụlọ na-ekwukarị na mgbanwe mba ahụ na ala nke eSwatini "agaghị eme n'otu ntabi anya".
Onye ntorobịa nke Nigeria bụ Ibrahim Rabiu na-enyocha ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka Slovakia club Slovan Bratislava na Sunday ka ha meriri 3-1 na AS Trencin.
Manchester United, bụ onye na-eme egwuregwu United States bụ Paul Pogba, kwuru na ọ "enweghị nsogbu" na onye njikwa Jose Mourinho na "inyefe" anaghị eche ya n'uche.
Senator Mark na-eme ka gọọmenti etiti gọọmentị kpee ikpe maka ebubo na ọ naghị enweta ego
Onye isi oche nke otu Senate, bụ David Mark, dọkpụụrụ Onye Nlekọta Ọchịchị Nlekọta Ndị Pụrụ Iche maka iweghachite ihe onwunwe n'ihu Ụlọikpe Ukwu Federal, Abuja.
Bayern Munich star Arturo Vidal na-eche Real Madrid ọkara ikpeazụ mgbe ikpere ọrụ
Arturo Vidal bụ isi ihe mgbagwoju anya maka Njikọ Njikọ Championsern nke Bayern Munich megide ọganihu Real Madrid mgbe Jctp Heynckes, bụ onye na-esote ọkwọ ụgbọala, gosiri na Monday ọ chọrọ ka ịwa ahụ obere obere.
Ndị na-egwu ụgbọala na-achọsi ike na acid n'ihi ebubo a na-ekwenyeghị na ha
Onye ahia na Akala, Mushin, Lagos State, Toyin Busari, na-ebuso ya ọkụ mgbe ọ hụrụ enyi ya n'anya na-atụkwasị ihe a na-eche na ọ bụ acid n'ahụ ya.
Oando: N'ikpeazụ, anyị ga-alaghachi azụ na ego anyị - onye na - ekenye òkè
N'ikwu okwu banyere ibuli nkwonkwo nkwonkwo, Mr. Babatunde Badmus, Pacesetter Shareholder Association kwuru, sị: "Anyị na-enwe obi ụtọ na SEC na NSE emesị gee ntị n'ekpere nke ndị nwe ọnụ ọgụgụ obere. Ọ bụ ihe nwute nke a weere ọnwa isii, n'agbanyeghị nke ahụ, anyị nwere obi ụtọ na n'ikpeazụ ka anyị kwesịrị inweta ọrụ ọma nke ụlọ ọrụ ahụ. "
Iran megidere mwakpo na Middle East
President Iranian President Hassan Rouhani kwuru Wednesday na Iran "ebughị n'obi ime ihe ọ bụla" megide ndị agbata obi ya kama ọ ga-anọgide na-eweta ngwá agha ọ bụla ọ chọrọ iji chebe ya.